UGonyo lwePfizer-BioNTTech COVID-19 oluvunyiweyo lwaBantwana 5-11 kuNgxamiseko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » UGonyo lwePfizer-BioNTTech COVID-19 oluvunyiweyo lwaBantwana 5-11 kuNgxamiseko
Namhlanje, i-US Food and Drug Administration igunyaze ukusetyenziswa ngokungxamisekileyo kwePfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine kuthintelo lwe-COVID-19 ukubandakanya abantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-11 ubudala. Ugunyaziso lwalusekwe kuphononongo olucokisekileyo noluselubala lwe-FDA lwedatha olubandakanya igalelo elivela kwiingcali zekomiti yeengcebiso ezizimeleyo ezivote kakhulu zixhasa ukwenziwa kogonyo kubantwana abakweli qela lobudala.
Amanqaku aphambili kubazali kunye nabanonopheli:
• Ukusebenza kakuhle: Iimpendulo zamajoni omzimba kubantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-11 ubudala zazithelekiseka nezo zabantu abaneminyaka eli-16 ukuya kuma-25 ubudala. Kolu phononongo, isitofu sokugonya sasisebenza ngama-90.7% ekuthinteleni i-COVID-19 kubantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-11.
• Ukhuseleko: Ukhuseleko lwesitofu luye lwaphononongwa kubantwana abamalunga nama-3,100 ababudala buyiminyaka emi-5 ukuya kwi-11 abafumene isitofu sokugonya kwaye akukho ziphumo bezingalindelekanga zithe zafunyanwa kuphononongo oluqhubekayo.
• IKomiti yeeNgcebiso yamaZiko oLawulo noThintelo lweZifo (CDC) kwiZiqhelo zoGonyo iyakuhlangana kwiveki ezayo ukuze kuxoxwe ezinye iingcebiso zeklinikhi.
“Njengomama nogqirha, ndiyazi ukuba abazali, abo banyamekela abantwana, abasebenzi besikolo, nabantwana bebelindele ugunyaziso lwanamhlanje. Ukugonya abantwana abancinci ngokuchasene ne-COVID-19 kuya kusisondeza ekubuyeleni kwimeko yesiqhelo, utshilo uMkomishinala obambeleyo we-FDA uJanet Woodcock, MD "Uvavanyo lwethu olupheleleyo nolungqongqo lwedatha ephathelele kukhuseleko kunye nokusebenza kwesitofu sokugonya kufuneka siqinisekise abazali kunye nabagcini. ukuba esi sitofu siyahlangabezana nemigangatho yethu ephezulu.”
Isitofu sokugonya sePfizer-BioNTech COVID-19 kubantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-11 ubudala silawulwa njengedosi esisiseko yeedosi ezimbini, iiveki ezi-3 ngokwahlukeneyo, kodwa lidosi esezantsi (iimicrogram ezili-10) kunelo lisetyenziselwa abantu abaneminyaka eli-12 ubudala nangaphezulu. (30 micrograms).
E-US, iimeko ze-COVID-19 kubantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kweli-11 ubudala zenza i-39% yamatyala kubantu abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala. Ngokwe-CDC, malunga ne-8,300 ye-COVID-19 iimeko kubantwana abaneminyaka emi-5 ukuya kwe-11 ubudala ezikhokelele esibhedlele. Ukusukela nge-17 kaOkthobha, ngama-691 abantu ababhubhileyo kwi-COVID-19 e-US kubantu abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala, kwaye kwasweleka i-146 kwiqela leminyaka emi-5 ukuya kweli-11.
“I-FDA izibophelele ekwenzeni izigqibo ezikhokelwa yinzululwazi elunokuthenjwa luluntu noluntu lwezempilo. Siqinisekile kukhuseleko, ukusebenza kunye neenkcukacha zokwenziwa kolu gunyaziso. Njengenxalenye yokuzibophelela kwethu ekuhleni malunga nokwenza izigqibo zethu, ezibandakanya intlanganiso yethu yekomiti yeengcebiso kuluntu ekuqaleni kwale veki, sithumele amaxwebhu namhlanje axhasa isigqibo sethu kunye nolwazi olongezelelweyo oluchaza uvavanyo lwethu lwedatha luza kuthunyelwa kungekudala. Siyathemba ukuba olu lwazi luyanceda ekwakheni ukuzithemba kubazali abenza isigqibo sokuba bagonywe na abantwana babo,” watsho uPeter Marks, MD, Ph.D., umlawuli weZiko le-FDA loVavanyo lweBiologics noPhando.
I-FDA izimisele ukuba isitofu sokugonya se-Pfizer sifezekise imilinganiselo yogunyaziso lokusetyenziswa olungxamisekileyo. Ngokusekwe kubungqina obupheleleyo besayensi obukhoyo, iingenelo ezaziwayo nezinokubakho zesitofu sokugonya i-Pfizer-BioNTech COVID-19 kubantu ukuya kutsho kwiminyaka emi-5 yodlula imingcipheko eyaziwayo nenokubakho.